TATITRY NY GOVERNEMANTA TEO ANATREHAN’NY ANTENIMIERAMPIRENENA. – Ministère de la Jeunesse et des Sports
Nanao ny tatitry ny asa vita nandritra ny taona 2020 teo anivon’ny Antenimierampirenena ireo Minisitra isan-tsokajiny anio 14 jona 2021.
Ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena Andriamatoa TINOKA Roberto no nanao ny tatitra mahakasika ny asa vita eo anivon’ny Minisitera izay tantaniny.
Taorian’ny fihaonambe voalohany nataon’ny Minisitra Afrikanina ho fanatanterahana ny « Plan d’Action de Kazan » (PAK) manerana ny Afrika ny 12 septambra 2019 dia voafidy ho tompon-dakan’ny fampiharana ny Education Physique de Qualité eto Afrika ny Filoha Andry Rajoelina. Tafiditra ao anantin’ny fanatanterahana ny plan de kazan ny fananganana fotodrafitrasa toy ny Kianja manarapenitra miisa 33 izay efa an-dalam-pamitana ary 31 kosa ho atao manomboka amin’ity taona ity.
Nasongadiny manokana ny kianjan’ny BAREA izay tsy mena mitaha amin’ny firenen-kafa ary manaraka ny fenitra takian’ny CAF sy ny FIFA izay mahazaka mpijery hatramin’ny 48000; ny kianjan’ny Barikadimy dia mahazaka mpijery 14000; ny kianjan’ Antsiranana izay an-dalam-pahavitana kosa dia mahazaka mpijery hatramin’ny 6000; ny kianja ao Morondava mahazaka mpijery 4000 ary ny ao Sambava mahazaka mpijery 2000.
Ankoatr’izay dia misy ihany koa ny kianja mitafo miisa 15 izay mahazaka mpijery 1000 manerana ny distrika sy faritra toa an’i Antalaha, Antsohihy, Mandritsara, Maintirano, Manakara, Farafangana, Sakaraha, Ampanihy, Ambovombe, Taolagnaro, sns.
Fanampin’izany ny fanamboarana kianja mitafo miisa 3 mahazaka hatramin’ny 4000 olona. Isany nahazo tombony amin’izany ny faritra ao Toamasina ary efa niatomboka ny asa. Ny ao Mahajanga sy Toliara kosa efa an-dalam-pahavitana.
Eo ihany koa ny kianja manarapenitra synthétique mahazaka mpijery 1000 izay miisa 30 ary efa an-dalam-pahavitana. Misitraka izany ny distrikan’i Tsiroanomandidy, Taolagnaro, Ihosy ary Betafo.
Ao Mahajanga sy Toliara no apetraka ny dobo filomanosana olaimpika izay mahazaka mpijery 1000. Ho vita amin’ity taona ity ny ao Mahajanga raha vinavinaina ho vita amin’ny fiatombohan’ny taona 2022 ny any Toliara noho ny hasarotan’ny toerana fanamboarana.
Ho fanatanterahana ny Plan de l’émergence Sud dia kianja manarapenitra synthétique miisa 8 izay mahazaka mpijery 500 no hatsangana any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy.
Ho fanamafisana ny fiaraha-miasa, ny fampandraharahana ny tanora ary ny fanatsarana ny seha-pihariana ho an’ny tanora dia hatomboka ny fanatsarana ny tranoben’ny tanora ary ho hamafisina ny fahaiza-manaon’ireo tanora mpikambana ao anatin’izany.
Ny fandaharan’asa « Pôle- Emplois Jeunes » kosa no sehatra iray hanamafisana ny fandraharahan’ny tanora sy hampivondronana azy ireo.
Amin’izao fanombohana izao dia ny faritra Analamanga, Ihorombe, Anosy, Androy, Alaotra Mangoro ary Atsimo Andrefana no voakasika amin’izany.